कुर्दिश अनुवाद – Vocre
Kurdish isalanguage spoken by the Kurdish people predominantly in the Middle East — specifically, northern Turkey, ईरान, इराक, र सिरिया. Find out how to translate English to Kurdish for business, स्कूल, वा यात्रा.
कुर्दिश अनुवाद खोज्दै? तपाईं सिक्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ कि व्यवसाय अंग्रेजी वाक्यांश वा आवश्यक छ शिक्षा अनुवाद, हामीले तपाईंलाई कभर गर्यौं.
कुर्दिश भाषा पाँच देशहरूमा बोलिन्छ: आर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान, इराक, र सिरिया. त्यहाँ तीन कुर्दिश भाषाहरू छन्, उत्तरी सहित, केन्द्रीय, र दक्षिणी कुर्दिश.
उत्तरी कुर्दिश (कुर्मानजी पनि भनेर चिनिन्छ) उत्तरी टर्कीमा बोलिन्छ, ईरान, इराक, र सिरिया. यो संसारभरि बोल्ने कुर्दिशहरूको सबैभन्दा सामान्य रूप हो. यो आर्मेनियामा गैर-कुर्दहरू द्वारा पनि बोलेको छ, चेचनिया, सर्कासिया, र बुल्गारिया.
केन्द्रीय कुर्दिश (सोरानी पनि भनेर चिनिन्छ) इराक र इरानमा बोलिन्छ. यो ईरानको आधिकारिक भाषाहरू मध्ये एक हो, र प्रायः मानिसहरूले यो भाषालाई केवल "कुर्दिश" को रूपमा सम्बोधन गर्छन् - "केन्द्रीय कुर्दिश" होईन.
दक्षिणी कुर्दिश (पलेवानी वा Xwarîn को रूपमा पनि चिनिन्छ) इराक र इरानमा बोलिन्छ. लाकी दक्षिणी कुर्दिश भाषा हो (यद्यपि धेरै भाषाविद्हरु तर्क गर्छन् कि यो पूर्ण रूपमा कुर्दिश भन्दा अलग छ).
विज्ञहरू त्यो अनुमान गर्छन् 20.2 मिलियन मानिसहरु संसार भर मा कुर्दिश बोल्छन्. 15 ती भाषी मध्ये लाखौं टर्कीमा बस्छन्, यो देश कुर्दाहरूद्वारा सब भन्दा बढी जनसंख्या भएको हो. यो तेस्रो सबैभन्दा धेरै बोलिने ईरानी भाषा हो.
अचम्म गरी, यो कुर्दिस्तानको मुख्य भाषा हो, कुर्द मुख्यतया बोलिने भाषा हो जहाँ एक क्षेत्र. कुर्दिस्तानले उत्तरी इराक समेट्छ, दक्षिण पूर्वी टर्की, उत्तरी सिरिया, and northwestern Iran.
उत्तरी कुर्दिश (कुर्मन्जी) भाषा मूल कुर्दसँग धेरै नजिकको सम्बन्धित छ. अन्य बोलीले अन्य छिमेकी भाषाहरूबाट शब्दहरू र उच्चारणहरू लिएको छ, जबकि कुर्मन्जी यसको उत्पत्तिमा सत्य नै रहेको छ.
कुर्दिश भाषाले दुई अक्षरहरू प्रयोग गर्दछ: ल्याटिन र अरबी; यसले चार फरक लेखन प्रणाली प्रयोग गर्दछ. कुर्दिश एकीकृत वर्णमाला छ 34 characters.
अघि 1932, टर्की र सिरियामा कुर्दहरूले अरबी लिपि प्रयोग गर्थे; १ 30 .० को दशकबाट, यस क्षेत्रमा कुर्दहरूले ल्याटिन लिपि प्रयोग गर्न थाले. इराक र इरानमा, कुर्दाहरूले अझै अरबी लिपि प्रयोग गर्दछन्.
सोरानी (केन्द्रीय कुर्दिश) अरबी वर्णमाला प्रयोग गर्दछ. १ २० को दशकमा काबानले यो लिपि सिर्जना गर्‍यो, तर सद्म हुसेनको पतन पछि यो मिडियामा व्यापक रूपमा प्रयोग भएको थिएन (जसले कुर्दिश वक्ताहरूलाई सताए).
सोरानी कुर्दाहरू प्रायः सुन्नी इस्लाम र इसाई धर्मको अभ्यास गर्दछन्. मौखिक परम्परा संसारको यस भाग मा धेरै महत्त्वपूर्ण छ, र कुर्दिश महाकाव्य कविताहरु जो Lawj प्रेमको कथाहरु भन्छन्, साहस, र लडाई. The first evidence of Kurdish literature is from the seventh century.
कुर्दिश अ English्ग्रेजी अनुवाद
अंग्रेजीलाई कुर्दमा अनुवाद गर्नु एकदम गाह्रो छैन. अंग्रेजी र कुर्दिर व्याकरणको धेरै नियम साझा, which many native English speakers pick up pretty easily.
यस भाषाको व्याकरणले विषय पछ्याउँदछ, वस्तु, verb order.
धेरै कठिनाई अ speakers्ग्रेजी स्पिकरहरू कुर्दिश भाषा सिक्ने क्रममा रहेको एउटा कठिनाइ भनेको शब्दहरूको उच्चारण हो. फरक कुञ्जी शब्द कसरी उच्चारण गर्ने भन्ने सिक्नको लागि कुर्दिश ठूलो स्वरले सुन्नु एक उत्तम तरिका हो.
धेरै मूल अ English्ग्रेजी स्पिकरहरू पनि कुर्दिसलाई अ to्ग्रेजीमा अनुवाद गर्दा चुनौतीमा पर्न सक्छ (र यसको विपरित) because the language is written using Latin or Arabic lettering.
पूर्ण नयाँ भाषाको व्याख्या गर्नु धेरै नेटिभ अंग्रेजी भाषीहरूको लागि गाह्रो हुन सक्छ. अझै, यदि तपाईंसँग पहिले नै अरबी वा ल्याटिन पदहरू पढ्न केही अनुभव छ भने, you may find translationsalittle easier.
कुर्दसंग पनि परस्पर परस्पर बुझ्न मिल्ने बोली हुँदैन. मतलब भाषाका विभिन्न भाषाहरू अलग अलग फरक फरक छैन. तपाईं विश्वभर विभिन्न कुर्दिश भाषी राष्ट्रहरूमा यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ र सामान्यतया भाषाका भिन्नताहरू सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ - एकचोटि तपाईंले आधारभूत कुर्दिश अनुवादमा पोख्त गर्नुभयो।.
कुर्दिश अनलाइन सिक्ने कोशिश गर्दै? यात्राको लागि द्रुत अनुवाद आवश्यक छ, स्कूल, वा व्यापार? हामी मेशिन अनुवाद सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सिफारिस गर्दछौं जसमा कुर्दिश अनुवाद उपकरण छ र सजिलैसँग भाषणलाई पाठ अनुवाद गर्न सकिन्छ, जस्तै Vocre अनुप्रयोग, मा उपलब्ध गुगल प्ले एन्ड्रोइड वा को लागी एप्पल स्टोर IOS को लागी.
कुर्दिस अनुवाद सेवाहरू
अ -्ग्रेजी-कुर्द अनुवादकहरू र अनुवाद सेवाहरू प्राय: प्रायः चार्ज गर्दछन् $100 एक घण्टा, यो एक विशेष भाषा मानिन्छ. यदि तपाईं लामो पाठहरु अनुवाद गर्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ, यो धेरै मूल्यवान हुन सक्छ, त्यसकारण हामी पाठलाई भाषा अनुवाद सफ्टवेयर प्रोग्राम वा अनुप्रयोगमा इनपुट गर्न सिफारिस गर्दछौं.
के तपाईसँग कुर्दिश अनुवाद संग अनुभव छ? अंग्रेजीमा कुर्दबाट अ or्ग्रेजी वा कुर्दिश अनुवाद गर्ने बेलामा तपाईं के-कस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्नुहुन्छ?